Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya oo booqasho ku tegay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya oo booqasho ku tegay Garowe
A warsame 4 November 2014 4 November 2014
Mareeg.com: Safiirka dowladda Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Bekar ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee xarrunta maamulka Puntlnad.
Wafdiga Safiirka oo saaka ka ambabaxay Muqdisho ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey Madaxweyne ku xigeenka Puntland, C/xakiim Camey, Wasiiro, Xildhibaano iyo dadweyne.
Wafdiga safiirka ayaa booqasho kala duwan ku tagey Xarunta Agoonta, Isbitaalka Garoowe iyo Dugsiga Sare ee Gambool iyagoo goobahaas kula kulamay masuuliyiinta maamusha.
Safiirka Turkiga ayaa Xarunta Agoonta ku wareejiyey deeq raashin ah oo ay ugu tala galeen Ardayda ku nool xarunta Agoonta ee magaalada Garoowe, Waxay isla xarunta warbixin ka dhageysteen maamulka Xarunta.
Wafdiga Safiirka ayaa kulan kula qaatay xarunta Madaxtooyada Puntland Madaxweynaha Puntland Dr C/wali maxamed Cali Gaas iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo la xiriira horinta mashaariicda Turkiga uu ka fuliyo Puntland.
Madaxweynaha Puntland Dr C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa safiirka uga mahadceliyey booqashada uu ku soo gaaray isagoo ku soo dhaweeyey Puntland.
Maamulka Puntland ayaa mar kasta ku dooda in deeqaha dalalka caalamku ugu talagaleen Soomaaliya loo badiyo koonfurta dalka, waxaana inta badan wakiilada caalamka ee jooga tagaan Garowe.
Wasiirka arrimaha gudah oo la eedeeyey lana qorsheeyey in looga yeero baarlamanka
WAR-CUSUB: Askar Taliyaani ah oo Muqdisho ku xusay maalinta ciidamada dalkaas